Somaliland Oo Si Rasmi Uga Hadashay Saldhig Ay Siineyso UK | Salaan Media
Somaliland Oo Si Rasmi Uga Hadashay Saldhig Ay Siineyso UK
Hargaysa (Salaanmedia.com)_ Somalilanad ayaa xaqiijiysay in UK ay dooneyso, ayadana ay diyaar u yahay inay saldhig milatari siiso magaalada Berbera, waxayna sheegtay inay diyaar u tahay inay dalal kale casuumto.
“Haddii dal aad nooga yar oo Jabuuti ah uu saldhigyo badan marti-geliyo, maxaa u diidaya Somaliland” ayuu yidhi Cigaal.
“Somaliland waxay muhiimad u tahay UK, dalal badan ayaa doonaya inay halkan saldhigyo badan ka sameystaan, UK aad ayay u xiiseeneysaa middaas” ayuu yidhi Cigaal.
Danaha UK ee Somaliland waxaa sidoo kale ka mid ah xoojinta xidhiidhka dibadeed iyo kan dhaqaalaha, sida uu sheegay Cigaal.
“Waxaan dooneynaa inaan casuumno cid kasta oo dooneysa inay yimaadaan Somaliland” ayuu yidhi Cigaal, isaga oo tilmaamaya in goor horeba Imaaraadka Carabta uu billaabay hanaan uu saldhig uga furanayo Somaliland.